Eyona ndlela ininzi yeYurophu inempumelelo yeFascist Leader
UFrancoco Franco, umtyholi waseSpain kunye nomntu jikelele, mhlawumbi wayeyinkokheli ye-fascist yaseYurophu ephumelele kakhulu kuba wayekwazi ukuhlala emandleni aze afe. (Ngokusobala, sisebenzisa ngokuphumelelayo ngaphandle kweyigwebo elithile, asitsho ukuba wayeyilungileyo, nje ukuba wayekwazi ukulawula ukuba abulawe kwilizwekazi elibona imfazwe enkulu kubantu. ngokukhokela impi ephilileyo kwimfazwe yembambano, eyawunqoba noHitler no- Mussolini uncedo kwaye wafika ekubambeleleni ngokusinda kwiintlobo ezininzi, nangona ulwaphulo kunye nokubulawa kukaRhulumente wakhe.
Umsebenzi wokuqala kaFrancisco Franco
UFranco wazalwa emndenini wentshontsho ngoDisemba 4 1892. Wayefuna ukuba ngumkholosisi, kodwa ukunciphisa ukuvunyelwa kwi-Naval Academy yaseSpain kuye kwamphoqa ukuba abuyele emkhosini, kwaye wangena kwi-Infantry Academy ngo-1907 oneminyaka eyi-14 ubudala. ukugqiba oku ngo-1910, wazinikela ekuphumeni kwamanye amazwe aze alwe eSpeyin eMorokhi kwaye wenza njalo ngo-1912, kungekudala wathola udumo ngokukwazi kwakhe, ukuzinikezela, nokunyamekela amajoni akhe, kodwa enye inkohlakalo. Ngomnyaka we-1915 wayengumthetheli omncinci kuwo wonke umkhosi waseSpain. Emva kokuphulukana nesilonda esiswini esiswini, waba ngowesibili-myalelo waza wabuya umlawuli wenkundla yaseSpain yangaphandle. Ngomnyaka we-1926 wayengumgadi we-brigadier jikelele kunye neqhawe likazwelonke.
UFranco wayengenalo inxaxheba ekubambeni kwe- Primo de Rivera ngowe-1923, kodwa waqhubeka waba ngumlawuli we-General General Military Academy ngowe-1928. Nangona kunjalo, le nto yachithwa emva kweenguqulelo ezazisusa ubukumkani zaza zadala iSepublic Republic yesiSpeyin.
UFranco, umbusi wamakhosi, wayehlala ekhulile kwaye ethembekile kwaye wavuselelwa ngo-1932 - kwaye wakhuthazwa ngowe-1933 - njengomvuzo wokungagxothi ukuguqulwa kwamaphiko. Emva kokuphakanyiswa kuMagosa Jikelele ngo-1934 ngurhulumente onelungelo lobulungisa, waqhayisa ngokugqithisileyo imvukelo yabasebenzi bamayini. Abaninzi bafa, kodwa wayekhulise idumela likazwelonke ngokuqhubekayo phakathi kwelungelo, nangona ekhohlo wayemthiyile.
Ngomnyaka we-1935 waba nguMongameli weCandelo eliPhezulu eliPhezulu leMpi yaseSpeyin waza waqala ukuguqula.
Njengoko ukuhlukana phakathi kwesobunxele kunye nelungelo laseSpanish landa, kwaye njengoko ubumbano belizwe lucaciswa emva kokubambisana kwe-left-wing inxaxheba kumandla okhetho, uFranco wanxusa ukuba imeko yongxamiseko ivakaliswe. Wayesaba i-takeover ye-communist. Kunoko, uFranco waxoshwa kwi-General Staff waza wathumela kwiiItary Islands, apho urhulumente wayenethemba lokuba wayekude kakhulu ukuba aqale ukukhupha. Babengafanelekanga.
Ekugqibeleni wagqiba ekubeni ajoyine ukuvukela okulungileyo, okulibaziseko ngamanye amaxesha wayemhlekisa, kwaye ngoJulayi 18, 1936, wathetha ngeendaba zeemvukelo zamajoni eziqithi; Oku kwalandelwa ukunyuka kwilizwe. Wathuthela eMorocco, wawalawula umkhosi wamajoni, waza waya eSpeyin. Emva kohambo oluya eMadrid, uFranco wakhethwa yimikhosi yobuzwe ukuba abe yinhloko yeburhulumenteni, ngenxa yegama lakhe, umgama ukusuka kumaqela ezopolitiko, i-original figurehead yafa, kunye nenye ngenxa yokutya kwakhe kwindlala.
Amazwe kazwelonke kaFranco, axhaswa yimikhosi yaseJamani neyamaNtaliyane, alwa ngokukhawuleza, imfazwe eqinileyo eyayibuhlungu kwaye inobungozi. UFranco wayefuna ukwenza okungaphezu kokuphumelela, wayefuna 'ukuhlambulula' iSpeyin ye-communism.
Ngenxa yoko, wahola ilungelo lokugqiba u-1939, apho kwakungekho nto yokuxolelana nayo: wabhala imithetho yokwenza nayiphi na inkxaso kwiRiphabhlikhi yoluphulo-mthetho. Ngethuba eli lixesha urhulumente wakhe waphuma, ulawulo lobundlobongela lwaxhaswa, kodwa luhlala luhlukileyo kwaye luphezulu, iqela lezopolitiko elidibanisa amaFascist kunye neCarlists. Ikhono alibonayo ekubunzeni nasekuhlanganyeleni le mibutho yezopolitiko yamaqela aphilileyo, ngamnye nombono wakhe okhuphisanayo emva kwemfazwe yaseSpeyin, ibizwa ngokuba 'yinto enobulumko'.
IMfazwe Yehlabathi kunye neMfazwe Yomlomo
Uvavanyo lwangempela lokwenene loxolo ngoFranco lwaluqala kwiMfazwe Yehlabathi yesi-2, apho uFranco waseSpeyin waqala ukuboleka kwi-Axis yaseJamani-isiNtaliyane. Nangona kunjalo, uFranco wagcina iSpeyin ephuma empini, nangona oko kwakungekho ngaphantsi kokubona kwangaphambili, nangakumbi umphumo wokuqapha kukaFranco, ukugatywa kukaHitler kwemfuno eziphezulu zikaFranco kunye nokuqonda ukuba impi yaseSpain yayingenakukwazi ukulwa.
Amanyano, kuquka i-US neBritani, ayinike iSpain uncedo olwaneleyo ukuze bahlale bengathathi hlangothi. Ngenxa yoko, urhulumente wakhe wasinda ekuhlakaleni kunye nokutshatyalaliswa ngokupheleleyo kwabalandeli bakhe bexesha elidala. Ubundlobongela bokuqala bemfazwe evela kummandla osentshonalanga waseYurophu, kunye ne-US - babemjonga njengowomduduzi wokugqibela wongqongqangi - wanqotshwa kwaye iSpain yabuyiselwa njengomlingane olwachasene neCommunity War .
Ngebudeni bemfazwe, kwaye ngethuba lokuqala lolawulo lwakhe lolawulo, urhulumente kaFranco wabulala amashumi amawaka "abavukeli", wayevalelwe isigxina sesigidi, waza wawachazela izithethe zendawo, eshiya intshutshiso encinane. Nangona kunjalo ukunyanzelwa kwakhe kwakudlula ixesha elide njengoko urhulumente wakhe waqhubeka ngawo-1960 kwaye ilizwe laguqula ubuhlanga ukuba lube luhlanga lwangoku. I-Spain nayo yanda kwezoqoqosho, ngokungafani noorhulumente bobukhosi baseMpuma Yurophu, nangona yonke inkqubela phambili yayingakumbi ngenxa yesizukulwana esitsha sabantu abacingayo kunye nezopolitiko kunokuba noFranco ngokwakhe, oye waqhubeka ekhula kwihlabathi lenene. UFranco naye wajongwa ngokugqithiseleyo nje ngezenzo kunye nezigqibo zabangaphantsi kwabo ababetyalayo behamba izinto zehla kwaye bafumana idumela elizweni jikelele lokuphuhlisa nokuhlala.
Ngomnyaka we-1947 uFranco wayedlulise umvoti owenza iSpeyin ibe ngumbuso owawuhamba naye ngobomi, ngowe-1969 wachaza umlandeli wakhe osemthethweni: INkosana Juan Carlos, unyana ongowokuqala wenkokeli ebangela isihlalo sobukhosi saseSpeyin. Kungekudala ngaphambi koku, wayevumele ukunyulwa okhethweyo kwipalamente, kwaye ngowe-1973 wasula phantsi kwamanye amandla, wasala njengenhloko yombuso, umkhosi kunye neqela.
Ekubeni ehlupheke kwi-Parkinson iminyaka emininzi - wagcina loo mfihlo imfihlelo - wafa ngo-1975 emva kokugula okude. Kwiminyaka emithathu kamva uJan Carlos wavuselela idemokhrasi ngokuthula; ISpeyin yayibe yindwendwe yomgaqo-siseko wamanje.
UFranco wayengumntu onobuchule, njengomntwana, xa isithuba sakhe esifutshane kunye nesigxina esiphakamisayo samenza ukuba ahlaselwe. Unokuba nemvakalelo ngaphezu kwemiba encinci, kodwa ubonakalise ubanda obunzima ngaphezu kwanoma yini into embi, kwaye wabonakala ekwazi ukuzisusa ekufeni. Wadelela i-Communism kunye ne-Freemasonry, ayesabayo yayiza kuthatha iSpeyin kwaye ayithandi bobabini basempumalanga nentshona-Yurophu emva kwehlabathi leMfazwe II .
Indlela yokubopha iHocve Hitch
Amasiko aseMtshato aseShayina - Ukuzibandakanya
URick Goad - Umntu Wemimangaliso
UAstronaut uEdgar Mitchell: "I-UFOs Real"
Funda i-Pencil Sketching Isinyathelo-ngeNyathelo Ukutsha Umlilo Wakho
Idolophu endala kunazo zonke e-US
Isogram (iWindows Play)